अर्थ « Ramechhap News
ज्योति विकास बैंकको सिइओमा मनोज ज्ञवाली
१३ वैशाख, काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोज ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बैंकमा २ वर्षदेखि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत ज्ञवाली चार बर्षसम्मको लागि सिइओ
‘सरकारले मितव्ययी नीति लिएर काम गर्छ’
२३ फागुन, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै चुलिएका असीमित दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्चको स्रोत प्रवाहमा मितव्ययी हुने नीति अपनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष
१४ फागुन, रामेछाप । रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लाको सीमाना लिखु खोलामा निर्माण हुन लागेको लिखु–४ जलविद्युत आयोजनामा रामेछापवासीलाई संस्थापक (प्रमोटर) सेयर दिन जनप्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँगै
रामेछापको लिखु तल्लो जलविद्युत आयोजनमा लगानी जुटयो, रामेछापवासीले शेयर हाल्न पाउने
११ फागुन, काठमाडौं । रामेछापको लिखु खोलामा निर्माण हुने २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटेको छ । सानिमा हाइड्रो समूहले निर्माण गर्ने आयोजनामा ५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको
माथिल्लो तामाकोशीमा शेयर हाल्न पैसा ठीक पार्नुस्
२१ माघ, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशीको तीन अर्बभन्दा बढीको आइपिओ आउने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावित र आम नेपालीका लागि साधारण
अब जुनसुकै बैंकबाट पैसा जम्मा गर्न सकिने
९ माघ, काठमाडौं । निक्षेपकर्ताले जुनसुकै बैंकबाट पनि आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवालाई थप सरल र सहज बनाउन सेवाग्राहीलाई पायकपर्ने जुनसुकै बैंकमा
पर्यटन सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा केसी
२७ कात्तिक, रामेछाप । पर्यटन व्यावसायी सहकारी संस्थाको सातौ साधारण सभा र तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । खाँडोदवी–६ मा रहेको सहकारीको अधिवेशनबाट कृष्णहरि केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
गृह राज्यमन्त्री श्रेष्ठद्धारा गौतमश्री मार्टको उदघाटन
२५ भदौ, काठमाडौं । गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठले गौतमश्री बिजनेश ग्रुपले संचालनमा ल्याएको गौतमश्री मार्टको उदघान गरेका छन् । मार्टको उदघान गृह राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले संयुक्त रुपमा
रामेछापको लिखु हाइड्रोपावरमा रुसको ५ अर्ब १० करोड लगानी
२१ भदौ, काठमाडौं । रामेछाप दोलखा र ओखलढुंगाको सीमानामा निर्माण हुन लागेको ३० मेगावाट क्षमताको पिके हाइड्रोपावर प्रालिमा रुसले ५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग
नेपाल टेलिकमको एसएमएस सेवा निशुल्क
२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशभरका बाढी–पहिरोको उद्धारमा सूचना आदानप्रदानमा सहजता सिर्जना गर्न आइतबारदेखि लागु हुने गरी एसएमएस सेवा निशुल्क गरेको छ । सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेले मन्त्रालयले बाढी
रामेछापको आठ स्थानीय तहमा कहाँ कति प्रतिशत मत खस्यो ?
२ जेठ, रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा सात प्रतिशत कम
रामेछापमा २० वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसको जित ? (नामसहित)
२ जेठ, रामेछाप । रामेछापमा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत वडा अध्यक्षका उम्मेदवाहरुको धमाधम परिणाम सार्वजनिक
मन्थली नगरपालिका–२ को वडाअध्यक्षमा एमालेका कार्कीसहित प्यानल नै विजयी
२ जेठ, रामेछाप । मन्थली नगरपालिका–२ को वडअध्यक्षमा नेकपा एमालेका वडाअध्यक्ष सुरेन्द्र कार्की विजयी भएका